Fursadaha badan ee loo adeegsan karo Webka GIS ee hadda - Geofumadas
Ogast, 2017 ArcGIS-ESRI, Cartografia, Geospatial - GIS
Mawduuca looga hadlayo maanta waa Web GIS. Si aan 'loo aqoonin', waxaa si fudud loogu turjumi karaa 'Websaytka GIS', laakiin maxay tani dhab ahaantii ka dhigan tahay? Maxay tahay xajmiga? Maxay 'u leedahay fursado badan oo codsi' sida lagu sheegay cinwaanka boostadan?
Waxaa jira shan sababood oo uu Eric van Rees ku ciyaaro maqaal, si aan u muujinno (oo nagu qanciyo) in Web GIS uu hadda yahay kobaca 'fikriga' dugsiga 'GIS'; iyo, marka lagu daro, in isbedelkaan uu ku lug leeyahay kala duwanaanta ma aha oo keliya qaabka Sidee? Shaqada GIS laakiin sidoo kale shuruudaha waa in ay haystaan ​​si ay u dhammaystiraan isticmaalka tiknoolijiyada casriga ah.
Waxay sidoo kale noqon kartaa mid ansax ah oo aan isweydiinno haddii aan dib u cusbooneysiinno mawduucan, maadaama aynu u malaynayno inaanu noqono, waxaan ognahay ama naloolajin karaa nafteena inaan mustaqbalka ee shabakadda GIS sidan oo kale.
GIS waa ka badan yahay CartographyMarkii hore sheegayaa suurtagalnimada qoraaga, markaas oo sheegaya in "map a ma aha yoolka ugu dambeeya ee shaqada, laakiin waxay noqon kartaa hal dhibic laga bilaabo baaritaan dheeraad ah oo dhamaystiran ka." Tani view of map sida 'qayb ka mid ah xujo ah' na loola jeedaa nidaam ku salaysan horumarinta mashaariicda GIS oo hab noqon lahaa qalab shaqo. Mashruuc noocee ah? Muuqaal ahaan, meelo kala duwan iyo sanado aan la qiyaasi karin ka hor sida aan dib dambe u gudbin doonno.
Oo waa GIS in sida oo kale ayaa si xaqiiqo ah la horyaalada waaweyn tan iyo kuwa dhamaadka fog oo ka mid ah 60 ee markii aan arkay iftiinkii. Iyada oo toban sanno oo cusub ku guuuleysto isbedelka: aqoon "Xagee waa maxaa", Kaliya qeexaya; si aad u ogaato wax badan "Waa maxay iyo sababta "ee hab oo loo qoro ama wax si cad oo sax ah go'aamiso, taasoo stage ah qalab cusub iyo fikradaha geospatially hadlaya.
GIS hadda wuxuu u baahan yahay 'iskaashi'. Isbedelkan isbeddelka ah, qoraha ayaa markale dib u dhigayaa, shaqada shaqsiyadeed waa la joojiyay. Laakiin waa in ay joojiyaan markan maxaa yeelay waxa uu sheegay in ugu leh shuqulka GIS desktop duugga ah waxaa loo baahan yahay mid ka mid ah "cartographer xariif ah 'ama' GIS falanqeeye '. Tani waxay horey u siinaysaa nalka caadiga ah ee doodda ku saabsan boostada soo socota si ay uga faaloodaan baaritaanyada iyo shaqada GIS. Waxay noqon laheyd arrin xiiso leh in aan isweydiinno (sida horay loogu sii hayo) taas oo ka mid ah tobannaan sano ee horumarinta GIS waxaan hadda ka shaqeynaa mid kasta oo ka mid ah wadamadeena... Waxaan ka wanaagsanaan lahaa halkan sababta oo ah waxaan ka dhignaa mawduuca ugu muhiimsan.
Van Rees wuxuu yiri "hadda, shaqaalaha GIS waxay u baahan yihiin inay iskaashi la yeeshaan dadka kale ee GIS inta ay iyagu mas'uul ka yihiin isku mar mashaariicda kartoonka ". Halkan waxaan ku muujineynaa ereyga 'simultaneity'. Nooca noocan ah ee 'mashruucyo badan' ee mashruuca taas oo dhab ahaantii qof keliya uusan samayn laga yaabo (xusuusnow shuruudaha) si buuxda u gutaan hawsha buuxda. Tani waxay leedahay wax badan oo macquul ah. Si fudud sababtoo ah xuduudaha isticmaalka caadiga ah ee GIS ayaa la kordhiyay, aqoon dheeraad ah oo maadooyinka kala duwan ayaa loo baahan yahay. Qoraagu waa weyn: "Tani waxay muujinaysaa in technology GIS ayaa noqonaya mid sii kordheysa warshadaha yar gaar ah (Misbaax ka yar, haddii aan macno turjumi) ah".
GIS hadda waxa uu diiradda saarayaa beelaha. Qoraalkan cusubi waxa uu xidhiidh la leeyahay wixii hore loo soo sheegay. Tixraac ayaa loo sameeyey jawi isdaba joog ah oo mawduucyo kala duwan la daaweynayo iyo sidoo kale jawiga cusub ee taas oo lagu sawiray qaabab cusub oo fikrado cusub iyo fikrado cusubi haystaan. Waa hagaag, intee in ka badan? Qoraagu wuxuu inoo sheegayaa in "tiknoolijiyada jilicsan ee badan oo la heli karo, waa aan macquul ahayn baro qalab kasta oo suuqa yaala "oo uu kula taliyo," waa wax ka fiican takhasus iyo diiradda ee mawduucyo ama codsiyo iyo ka qayb bulshada dhexdeeda iyaga oo matala. "
Tani waa mid macquul ah. Ogow in macluumaadka si joogto ah loo cusbooneysiiyo, in wixii aan ognahay maanta uu noqon doono waqti ku dhowaad-ku dhawaad ​​xaqiiqda dhabta ah, de-cusbooneysiiyo. Tani waa 'casriyeyn' joogto ah 'in xirfad kastaa ay tahay inay noqoto mid caqabad ku sii ahaato' tartanka '. Macluumaadku wuxuu ku yaalaa internetka, waxaanan u baahanahay waqti iyo laga yaabee inay qorriyaan loo baahan yahay si loo daboolo wax walba. Xaqiiqadu waxay tahay inaanan awoodin. Taasi waa sababta dadaalka iskaashiga ah ee GitHub, GeoNet, GIS StackExchange iyo qalabka kale sida ArcGIS Hub, taas oo aan hadda sheegeyno iyada oo la qiyaasayo in qoraagu uu ka yaryahay wax ka badan dhamaanba ESRI-yada ... Waa hagaag, shaki waliba, waxaan ku raacsannahay sababkiisa.
Barnaamijka iyo GIS hadda waa mid aan kala sooc lahayn. Waxaan u imid mid ka mid ah 'casriyeynta' asalka ah ee falanqaynta. Waxaa laga yaabaa in aan isticmaalno tarjumaadda suugaanta 'suxulka'(mar hore ayaan ogaanay meesha aan ku soconayno, sax?) Inkastoo Van Rees baaqaday in "luqado barnaamijyadooda aan loogu tala galay in lagu badalo laakiin in ay ballaariso technology geospatial", waxaa iska cad in ay jiri doonto hab kale si ay u sameeyaan u boodboodi ka 'map - Falanqaynta geospatial' Adeegga Web hadda aan 'suxulka' iyada oo loo marayo. Oo kii hore aynu ka hadalnaa ArcPy ka dib markii API cusub ee ArcGIS, xusay in maraya ... SciPy dhoobo ah Maktabadaha iyo baakadaha ku salaysan Python! (Pitoneros ... goobjoog!) Oo sheegaysa in aynu ka hadalnay ku saabsan mudnaanta barashada Python.
Laakiin, aynaan iloobin, waxaan u baahannahay muuji oo wadaag Macluumaadkayaga Kadibna way muuqdaan Jupiter Notebooks iyo maamulaha baakadka anaconda si loo hagaajiyo shaqooyinka wada shaqeynta.
Mashruuca GIS wuxuu qayb ka yahay Web GIS. Laga bilaabo in middani ay u sannad Google Maps 2005 inkastoo Google, sida qoraaga soo jeedisay, ka badan diiradda on suuqa macaamiisha ee geospatial xirfadle ah, ee loo yaqaan "warshadaha GIS" ka baran karin casharada qiimo shaqada ee Google.
Haddaba, waxaan u gudbin naftooda sida "warshadaha GIS" ama "warshadaha geospatial"?, Sax in la yiraahdo wax beerta / domain isticmaalaya macluumaadka da'ayeen iyo maps, waa qayb ka mid ah warshadaha ee geospatial?
Taas waa xaqiiqdii. markaas waxaan ka hadleynaa baabuurta, baaskiilada xiran, UAVs, xaqiiqada qabsiyo, ie oo dhan kuwa teknoolajiyada in ay leeyihiin xogta da'ayeen iyo maps, gudaha iyo caadiga ah, mid ka mid ah ilaha ugu weyn ee ay xogta. Wax aad u xiiso badan oo muujinaya.
Maxaa laga bartay? Waxaa la ogaaday in tiknoolajiyada kuwaas oo kobcin kara tiknoolijiyada casriga ah lagu dari karo. Gaar ahaan isticmaala mobiilka, barnaamijyadooda daruur, falanqaynta xogta weyn, ee 'sayniska data' iyo sirdoonka ganacsiga, taasoo keentay in dhammaan kaabayaasha daruur oo waxaa lala kala saari Karin in isticmaalka GIS degaanka. Sayidka u bilawday qoraaga, waxa aad heli kartaa qaybaha GIS ayaa daruurtii ka dhex marayo browser web a, oo wuxuu oofin falanqaynta geospatial isticmaalaya Python.
Falanqayntan ayaa ah bilowgii wadahadal dheeraad ah. In dhuumaha waa GIS ayaa daruurtii ka dhex, laakiin kor ku xusan WebGIS mustaqbalka oo dhan. mustaqbalka in 'smart' meesha WebGIS la sii badan daro nolol maalmeedka in mustaqbalka 'magaalooyinka smart' badan oo hore u odoroso iyo xagga taas oo waajib inoo ah inaynu diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan.
Post Previous«Previous 3 ee isbadalada 27 ee QGIS 2.18
Post Next Available Available - Template si loo bedelo UTM isku-duwaha si GeographicNext »
Hal Jawaab u Jawaab in "Fursadaha badan ee loo adeegsan karo Webka GIS hadda"
article aad u fiican oo ku saabsan SIGWEB ah (WebGIS), waxaana la wadaagayaa views badan oo ku saabsan arrintan, oo ku saabsan wax kasta oo la xidhiidha wax soo saarka ugu weyn ee GIS dhaqameedyadu ay sanado badan ku maps ma guurto ah, iyo in wakhtiyadii dhammaadkoodii caalimiga, hadda khariidadaha Waxay leeyihiin qaar ka mid ah oo firfircoon oo borderless, la quudiyo noocyo badan oo hayee ka helaan ilo iyo dhaqamada kala duwan, iyada oo aan dhibaatooyin badan oo dhinaca farsamada ah.